सेक्सका बेला गरिने ‘स्टेल्थिङ’ के हो ? कतिपय देशमा यसलाई किन बलात्कार मानिन्छ ? | Ratopati
अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको विधानसभाले स्टेल्थिङ (अर्थात् सेक्सका बेला आफ्ना साथीलाई जानकारी नदिई वा सहमति बिना कण्डम हटाउनु) माथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।​ डेमोक्रेट सदस्य क्रिस्टिना गार्सिया पछिल्लो चार वर्षदेखि यो कानूका लागि प्रयास गरिरहेकी थिइन् । विधानसभामा यो विधेयक पेश गर्ने गार्सियाले भनिन्, ‘अब क्यालिफोर्नियामा यस्तो गर्नु अपराध हो भनेर स्पष्ट भइसकेको छ ।’
गार्सियाले भनिन्, ‘यस्तो खालको यो देशको पहिलो कानून हो । म अन्य राज्यलाई पनि क्यालिफोर्नियाको बाटोमा हिँड्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथै, स्टेल्थिङ अनैतिक मात्रै नभई अवैधसमेत भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’​ स्टेल्थिङको कानून बनाउनका लागि क्रिस्टीना गार्सिया सन् २०१७ देखि काम गरिरहेकी छिन् । त्यतिबेला विद्यार्थी रहेकी एलेक्जेन्ड्रा ब्रोडस्कीको एउटा रिपोर्ट ‘कोलम्बिया जर्नल अफ जेन्डर एन्ड ल’ मा प्रकाशित भएको थियो ।
यो कानूनका लागि जागरुकता फैलाउने श्रेय यहि रिपोर्टलाई नै दिइन्छ । यद्यपि, स्टेल्थिङ कुनै नौलो कुरा भने होइन ।
ब्रोडस्कीले सन् २०१७ मा प्रकाशित एउटा पर्चामा स्टेल्थिङमाथि लेख्ने एक चर्चित ब्लगरलाई उद्धृत गरेकी थिइन् । यी ब्लगर अब निष्क्रिय भइसकेको आफ्नो साइटमा अन्य पुरुषलाई साथीलाई थाहा नहुने गरी कण्डमलाई कसरी चुपचाप हटाउने भन्ने सल्लाह दिन्थे ।
ब्लगमा कमेन्ट गर्नेहरुले विभिन्न प्रकारको अभद्र टिप्पणी गरेका थिए ।
क्यालिफोर्नियाजस्तै अष्ट्रेलियाको राजधानी क्षेत्र (एसीटी) ले पनि पछिल्ला दिन स्टेल्थिङलाई गैरकानूनी घोषित गरेको थियो । यस्तो गर्ने त्यो अष्ट्रेलियाको पहिलो राज्य हो । हालका कानूनमा यो गतिविधि पहिला नै दर्ता थियो । तर नयाँ कानूनअन्तर्गत अब यसलाई यौन हमला मानिनेछ ।